Covid-19 – CTC Alarobia: maherin’ny 45 ireo marary efa raisina | NewsMada
Covid-19 – CTC Alarobia: maherin’ny 45 ireo marary efa raisina
Araka ny baikon’ny filoham-pirenena, tsy maintsy sokafana indray ny CTC etsy Alarobia. Am-peninasa, nanomboka ny talata alina teo, ity foibe fandraisana marary Covid-19 ity. 45 ireo marary raisina an-tanana ao raha ny omaly antoandro.
Maherin’ny 250 ny marary azo raisina eny an-toerana ary eo am-pikarakarana ireo toeran-kafa ny tompon’andraikitra. Efa mifanitsakitro ny marary any amin’ireo foibe sasany toy ny eny amin’ny Village Voara sy eny Mahamasina. Izany indrindra no nanokafana ity eny Alarobia ity.
Ireo mararin’ny Covid-19 maneho “forme modérée”, izany hoe, ireo maneho fahasemporana ary ilana hampiasaina “concentrateur d’oxygène” no raisina an-tanana eny amin’ny CTC Alarobia.
Matetika, na efa manafika ny avokavoka aza ny tsimokaretina Coronavirus, tsy mbola maheno fahasemporana ny marary. Efa midina hatrany amin’ny 60% ny tahan’ny “oxygène” anaty vatana vao mahatsiaro fahasemporana ny marary. Efa tena tara anefa izany ary efa tranga fahasarotana. Noho izany, tsy tokony hiandry sempotra vao manatona dokotera fa vao misy fambaran’aretina, tokony hanomboka ny fitsaboana rehetra raha ny torohevitry ny dokotera hatrany.
Marihina fa araka ny fandaminana napetraka, eny amin’ny CSB II ny handraisana ireo marary maneho “forme simple” ary eny anivon’ny hopitaly lehibe kosa ireo maneho tranga misy fahasarotana na “forme grave”.